Nagarik News - कस्तो होला एप्पलको आइवाच?
Tuesday 11 Jestha, 2073 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	प्रविधि	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / प्रविधि / कस्तो होला एप्पलको आइवाच?
कस्तो होला एप्पलको आइवाच?	26 May 2013 | 10:51am आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
आइवाच यस्तो हुनसक्छ
कलाकारको अनुमानमा आइवाच
त्यो जमाना रहेन जब मानिस समयका लागि घडी मै भर पर्नुपर्थ्यो। अब त टक्क स्मार्टफोन निकाल्यो, त्यसैमा समय हेर्न सजिलो। स्मार्टफोनै चाहिन्छ भन्ने पनि केही छैन, बजारमा पाइने सस्तोभन्दा सस्तो मोबाइलमा पनि समय सूचक भइहाल्छ। त्यसैले नाडी हेर्ने पुरानो पुस्तालाई गोजी छाम्ने अहिलेको पुस्ताले गिज्याइसक्यो। तर नाडीे पुस्तालाई नै पछ्याउनु पर्ने गरी स्मार्ट घडीहरुको विकास हुँदैछ अहिले। क्राउडफन्डिङ वेबसाइटमा चन्दा उठाएर बनाइएको स्मार्टवाचदेखि लिएर बजारमा आइसकेको सोनीको स्मार्टवाचसम्म हेर्दा कुनैले पनि स्मार्टवाचको क्षेत्रमा खासै केही गर्न सकेका छैनन्। बजारले यस्ता घडीलाई खासै रुचाएको देखिएको पनि छैन। के हरेक प्रडक्ट बजारमा ल्याउँदा ठूलै हल्लाखल्ला हुने ब्रान्ड भएकै कारण एप्पलको स्मार्टवाचले केही फरक गर्ला? हेर्न बाँकी छ। उत्सुकता बाँकी छ र उसले ल्याउने स्मार्टवाचमा चाहिँ खासै त्यस्तो अरुमा नभएका के विशेषता हुनेछन् भन्नेमा अनुमान पनि जारी नै छ।एप्पलले नाडीमा लगाउने स्मार्टवाच बनाउने योजना बनाउँदैछ भन्ने जानकारी न्युयोर्क टाइम्सले गत फेब्रुअरीमा गराएदेखि नै यस्तो अनुमान बढ्न थालेको हो। एप्पलसँगै अहिले गुगल, सामसुङ र माइक्रोसफ्टले समेत यस्तै खालका स्मार्ट वाच बनाउने भनिसकेको छन्।कहिले आउला त यो?एप्पलको आइवाच सन् २०१३ को अन्त्यसम्मा बजारमा आउने अनुमान धेरैले गरेका छन्। आइवाचका लागि एप्पलले आरआइटी डिस्प्ले बनाउन थालिसकेको बताइएको छ।
आइफोन, आइप्याडका लागि एप्पलले एलसिडी अर्थात् लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज प्रयोग गरेको भए पनि आइवाचका लागि ओलेड अर्थात अर्गानिक लाइट एमिटिङ डायड स्क्रिन प्रयोग गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। के फाइदा हुन्छ त यसले? यो ज्यादै पातलो र हलुका हुन्छ।
हुन पनि आइफोन जस्तो गोजीमा वा आइप्याड जस्तो ब्यागमा राख्ने चिज आइवाच पक्कै हैन। यसलाई त नाडीमा बाँध्नुपर्छ। नाडीमा बाँधेर हरदम आफूसँगै राख्नुपर्ने भएकोले यो जति पातलो र हलुका भयो, उति उपयोगकर्तालाई सरल र सहज हुन्छ।
आइवाचको स्क्रिन चाहिँ कत्रो हुन्छ त? पक्कै पनि नाडीमा बाँध्ने चिजको स्क्रिन धेरै ठूलो भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा एप्पलले १.८ इञ्चको डिस्प्लेको परीक्षण गरिरहेको भए पनि ज्यादै ठूलो देखिएको भएर अहिले साढे एक इञ्चमा परीक्षण गर्दैछ। त्यसमा चित्त नबुझे स्क्रिन अझै सानो हुनसक्छ।
के के होला त यसमा?स्मार्टवाच भनेपछि यसमा घडी त हुनैपर्यो। अनि त्यसलार्ए चलाउन ब्याट्री पनि हुनै पर्यो। फोन गर्न वा डाटा चलाउन नहुने भए त के स्मार्टवाच भयो र। त्यसो गर्न सानो सेल्युलर एन्टिना हुनै पर्यो। त्यसो त एप्पलले सानो खाले माइक्रोस्ट्रिप सेल्युलर एन्टिनाको प्याटेन्ट दर्ता गरिसक्यो। यसलाई नाडी घडी साइजको आइवाचभित्रै जडान गर्न सकिन्छ।बाँध्ने केले?भनिन्छ एप्पललाई सबैभन्दा समस्या अहिले आइवाचलाई नाडीमा बाँध्नका लागि के प्रयोग गर्नेमा भइरहेको छ। धेरैजसो घडी निर्माताहरुले त नाडीमा बाँध्न धातुकै प्रयोग गरिरहेका छन्। तर एप्पलले भने कम वजन हुने धातुको प्रयोग गर्ने बुझिएको छ। यसले आइवाचलाई महँगो र सँगसँगै विलासी सामान पनि बनाइदिनेछ। कम आय भएको बजारका लागि भने एप्पलले सस्तो, इन्टरचेन्जेबल छालाको वाचस्ट्रयाप प्रयोग गर्न सक्छ। छैटौँ जेनेरेसनको आइपड नानोका लागि पनि त्यस्तै प्रयोग गरिएकोले आइबीटाइम्सले यस्तो अनुमान गरेको हो।कस्तो देखिनेछ त आइवाच?यस्तै देखिनेछ भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न। एप्पलले आइवाच डिजाइन गर्न सय जना प्रडक्ट डिजाइनरहरुको समूहलाई काममा खटाइसकेको छ। यसको स्वरुप यस्तै नै देखिन्छ भनी अहिले नै भन्न सकिन्न। तपाइँले यही लेखसँगै देखिरहनुभएका डिजाइनहरु पनि यस्तो होला कि भन्ने कल्पना मात्र हो। कल्पना पनि अजब गजबका छन्। कसैले घडीबाटै फेसटाइममार्फत् भिडियो च्याटमा कुरा भइरहेको कल्पना गरेका छन्। त्यस्तो हुन आइवाचमा फ्रन्ट क्यामेरा हुनु आवश्यक छ। नाडीमा बाँध्ने भएकोले ब्याक क्यामेरा त किन हुनुपर्यो र। (एजेन्सीहरुको सहयोगमा) Tweet Related items
रंगीचंगी नयाँ आइफोन आइफोन सी को मूल्य ५४९ डलर, उपभोक्ता स्तब्ध सस्ता आइफोन कस्ता छन्? (फोटो सहित) माइक्रोसफ्टले फेरि ल्यायो आइप्याडविरोधी विज्ञापन (भिडियो सहित) आइफोन ५ विश्वको सर्वाधिक बिक्री हुने स्मार्टफोन नागरिकLatest from
वार्ताको औपचारिक जानकारी आएन: उपेन्द्र यादव नागरिकसँग भाग्य खुल्यो अफरका विजेतालाई स्कुटर पुरस्कार चक्काजाम अाह्वानविरुद्ध गृहको कडा चेतावनी बुढीखोलामा आएको बाढीले ५ घर बगायो 'घुम्ती पुस्तकालय'मा झुम्मिए विद्यार्थी प्रतिक्रिया
कालिकोटका बाढी पीडितलाई राहत वितरण
नागरिकसँग भाग्य खुल्यो अफरका विजेतालाई स्कुटर पुरस्कार
बुढीखोलामा आएको बाढीले ५ घर बगायो
'घुम्ती पुस्तकालय'मा झुम्मिए विद्यार्थी
अज्ञात रोगले जुम्लामा एकै स्कुलका दुई बालकको मृत्यु
नक्कली अमेरिकी डलर सहित पाकिस्तानी नागरिक पक्राउ
कांग्रेस आएपनि नआएपनि सरकार रहिरहन्छः उद्योगमन्त्री पाण्डे
छुटाउनु भयो कि	बलात्कृतलाई निरन्तर 'पीडा'दोलखा- मेलुङकी १४ वर्षीया किशोरी गत माघको एक साँझ गाउँकै एउटा विवाह भोजबाट घर फर्कदै थिइन्।...	दाइजो नदिँदा छोरी 'गायब'वीरगन्ज- दाइजोको माग आफूहरुले पूरा गर्न नसकेपछि छोरीलाई बिहेको पाँच वर्षपछि उसका ससुराल पक्षले गायब पारेेको भन्दै...	यौन जिज्ञासा मेट्न बलात्कारकाठमाडौं- राजधानीका बाह्रवर्षे एक बालकलाई जब वयश्क छिमेकीले मोबाइलमा अश्लील सिनेमा देखाए, उनको बालमस्तिष्कमा त्यसको गहिरो...	नेपाललाई प्राज्ञिक केन्द्र बनाउने उद्‍घोषलुम्बिनी- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनी गुरुयोजना छिटो सम्पन्न गरेर समग्र लुम्बिनीक्षेत्र विकासमा अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह...	बुद्धका शान्ति सूत्रबुद्धको जीवनकालमा कोशान्वीको संघमा एक भयंकर विवाद उत्पन्न भयो। त्यो विवादको कारण त्यति ठूलो थिएन। वास्तवमा...	Nagarik News